Puntland iyo Galmudug oo heshiis ku kala saxiixday Muqdisho (Sawirro) – Codkasoomaalida.com
Puntland iyo Galmudug oo heshiis ku kala saxiixday Muqdisho (Sawirro)	Dowlad gobolleedyada Puntland iyo Galmudug, ayaa heshiis saddex qodob ah ka gaaray colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo kaddib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Shirka lagu soo gabo-gabeenayey colaadda magaalada Gaalkacyo oo soo laalaabatay muddooyinkii u dambeeyey, waxaa marti-galiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu ka dhacay madaxtooyada.
shirka waxaa joob-joogeyaal ka ahaa Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Wakiilka Q.M u fadhiya Soomaaliya Michael Keating.
Madaxweyneyaasha dowlad gobolleedyadaasi Puntland iyo Galmudug, madaxda D.FS iyo Wakiil Q.M ayaa shir saxaafadeed qabtay shirka kaddib.
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas), ayaa fursad weyn ku tilmaamay kulanka lagu soo afjarayey colaadda Gaalkacyo, waxa uu sheegay in saddex qodob lagu heshiisyey oo ah in isu socodka magaalada dib loo soo celiyo, in ciidammo Boliis isku dhaf ah la geeyo iyo in Bisha Feberaayo kulan kale la isugu yimaado si looga hadlayo waxyaabaha ka dhaqan-galay qodobbada lagu heshiiyey.
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Galmudug, C/kariim Xuseen Guuleed, ayaa guul weyn ku tilmaamay in ciidammada la kala qaado, laguna dedaallo sidii looga wada qeyb-qaadan lahaa dhaqangelinta heshiiska saddexda qodob ah.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke, ayaa sheegay in uu rajeynayo in aysan dib u soo laaban colaadda magaalada Gaalkacyo oo hab amni iyo mid siyaasadeedba lagu xalinayo.
Wakiilka Q.M u fadhiya Soomaaliya Michael Cheating, ayaa sheegay in Q.M ay go’an tahay in ay taageerto heshiiskaan colaadda lagu daminayo, shacabka labada dowlad goboleedna uu ugu baaqayo in ay u istaagaan dhaqangelinta nabadda Gaalkacyo.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha J. Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sannadkaan cusub ee 2017-ka uu ku bilowdey maalin nabaddeed, waxa uu tilmaamay in Gaalkacyo ay Istaraatiiji u yahay dhaqaalaha Soomaaliya, muhiimna ay tahay in loo wada istaago in la fuliyo heshiiska hadda la wada gaaray.
Heshiiskaan saddex qodob ah ee Colaadda Gaalkacyo lagu soo afjarayo ayaa haddii uu dhaqangalo bisha labaad ee sannadkaan waxaa dhici doona kulan kale oo lagu eegayo waxyaabaha ka hirgalay iyo sidii loo sii wadi lahaa nabadda iyo xasiloonida magaalada gaalkacyo.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Post navigation
Previous Previous post: Guddiga Doorashooyinka Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha oo la magacaabay (Dhegeyso)Next Next post: Axmed Biif oo laga joojiyay Bandhig Faneed uu ku qaban lahaa Muqdisho-VIDEO
Recent Posts	Ilka Case iyo Kiin Jaamac Yare
Midab aan la doorin iyo qurux hablihii hore u daa!
Dhoolatus Siyaasadeed (Sawirro)
Haweeney tuurtay ilmo ay dhashay oo la soo qabtay (Dhegeyso)
INDHO-INDHEYN: Baarlamaan Hooy Qorshaha ku darso
Categories	FANKA IYO SUUGAANTA